होमवर्क हयाङ्आउटबाट कसरी बच्ने ? - बालबालिका - प्रकाशितः माघ १, २०७३ - नारी
होमवर्क हयाङ्आउटबाट कसरी बच्ने ?
बालबालिकाहरूलाई होमवर्क गराउने काम अहिले धेरै आमाबाबुका लागि समस्या बनेको पाइन्छ । बालबालिकाहरूले समयमा होमवर्क गर्न नमान्दा अभिभावकहरूमा एक प्रकारको तनाव सिर्जना हुन्छ । होमवर्क गराउने काम पनि एक प्रकारको कला भएकाले यो चुनौती नै हो । कार्टुन, गेम तथा विविध एप्सले गर्दा बालबालिकाहरूलाई होमवर्क गराउनु पनि समस्या नै बनोको पाइन्छ ।
बालबालिकाहरूलाई समयअनुसार काम गर्न सिकाउनुपर्छ । यसो गर्दा उनीहरू हरेक क्रियाकलाप समयमै गर्न उत्साहित बन्छन् । विद्यालयबाट होमवर्क दिइएको छैन भने पनि उनीहरूलाई कथा तथा कविताका किताब पढ्न दिन सकिन्छ । उनीहरूलाई होमवर्क नभएको दिनमा होमवर्क छैन, केही गर्नु पर्दैन भनेर चुप लगाउनु हँुदैन । काम नहुनेबित्तिकै बालबालिकाहरू टिभीका कार्यक्रम तथा गेमप्रति आकर्षित बन्छन् ।
पढ्ने स्थानको उचित व्यवस्था
प्राय: घरमा बालबालिकाहरूका लागि फरक कोठा हँुदैन । साथै उनीहरू बसेर पढ्ने स्थान पनि निश्चित हँुदैन । बालबालिकाहरू पढिरहेका बेला कुनै पाहुना आए भने उनीहरू ठाउँ सर्दै पढ्न विवश हुन्छन् । कुनै–कुनै घरमा त बालबालिकाहरूलाई भान्सा तथा शयनकक्षमा राखेर समेत अध्यापन गराइन्छ । कहिलेकाहीँ आमाहरू टिभी हेर्दै बालबालिकालाई पढाउँछन् । होमवर्क गर्न ढिलाइ गर्नेबित्तिकै आमाहरू बालबालिकालाई हप्काउन थाल्छन् । सजिलैसँग नानीहरूलाई होमवर्क गराउने हो भने उनीहरूका लागि पढ्ने स्थानको उचित व्यवस्था मिलाइदिनुपर्छ । यसो गरियो भने उनीहरू एकाग्र भएर पढ्न सक्छन् । उनीहरू आफैं पढ्न तथा सकारात्मक कार्यप्रति उत्प्रेरित हुनसक्छन् ।
आफू पनि व्यस्त रहने
नानीहरूको अध्यापनको समयमा आफूलाई अखवार तथा कुनै किताबमा व्यस्त राख्नुपर्छ । उनीहरूलाई अध्यापन गराउँदा आफूले खाना बनाउने, गफ गर्ने, टिभी हेर्ने, फोनमा कुराकानी गर्नेजस्ता पढाइसँग असम्बन्धित क्रियाकलाप गर्नुहँुदैन । आफू अगाडि बसेर अध्यापन गराउँदा नानीहरूले पढाइमा पूरा ध्यान लगाउँछन् ।
शिक्षकसँग नियमित भेट
आफ्ना नानीहरूलाई स्कुल भर्ना गरेपछि शिक्षकहरूसँग नियमित अन्तरालमा भेट गर्नुपर्छ । कतिपय अभिभावक विद्यालयले नै बोलाएको अवस्थामा समेत यस्ता मिटिङमा जान चाहँदैनन् जब कि यस्ता मिटिङ अभिभावकका लागि निकै प्रभावकारी तथा उपयोगी हुन्छन् । यसमा आफ्ना नानीहरूको प्रगति विवरणका विषयमा यथार्थ जानकारी पाउनुका साथै उनीहरूको कमजोरी वा सुधार गर्नुपर्ने पक्षसमेत थाहा पाउन सकिन्छ । शिक्षकसँग सोधेर आफ्ना नानीको आनीबानीमा ध्यान पुर्‍याउनका लागि पनि शिक्षकसँग समय–समयमा भेटघाट गर्नुपर्छ ।
कम्प्युटरमा होमवर्क गर्दा ध्यान
प्राविधिक विकासले गर्दा हिजोआज एक कक्षादेखि नै कम्प्युटर शिक्षा अध्यापन गराइन्छ । हिजोआज त गृहकार्य पनि कम्प्युटरमै गर्नुपर्ने हुन्छ । नानीहरूलाई सानैदेखि कम्प्युटरबारे ज्ञान दिनु राम्रो तर उनीहरू के गर्दैछन् भन्ने कुरा राम्रोसँग निगरानी गर्नुपर्छ । नानीहरू कम्प्युटरमा गेम पो खेल्दैछन् कि त्यो पनि विचार पुर्‍याउनुपर्छ । बालबालिकाहरूको कम्प्युटरमा सकेसम्म इन्टरनेट जडान गर्नुहँुदैन ।
कतिपय नानीहरू निकै जेहेन्दार हुन्छन् । उनीहरू स्कुलबाट घर आउनेबित्तिकै गृहकार्य गर्न बस्छन् । यस्ता नानीहरूलाई पनि अभिभावकहरू कचकच गरिरहन्छन् । गाली गरी पिट्न समेत बेर लाउँदैनन् । । साना नानीहरूमाथि यस्तो व्यवहार गर्नु राम्रो कुरा होइन । उनीहरूको मनोभाव बुझेर त्यहीअनुसार व्यवहार गर्नुपर्छ, अनावश्यक दबाब दिनुहुँदैन ।
पुस १२, २०७४ - घरपालुवालाई कसरी नुहाइदिने ?
भाद्र ७, २०७४ - सिल्कको साडी कसरी जतन गर्ने ?
किन्डरगार्टेन प्रिन्स एण्ड प्रिन्सेस् नेपालको उपाधि हिमान्सु र पल्लवीलाई माघ ७, २०७५
हांस्य कलाकारसंग वालवालिका माघ ३, २०७५
फेश अफ मारवाडी किड्स छानिए माघ १, २०७५
खुला नृत्य प्रतियोगिता मंसिर २७, २०७५
जेनिशालाई फेश अफ लिटिल फ्लावरको ताज मंसिर २६, २०७५
नेपाल किड्स आइकन साईसा मंसिर १३, २०७५